अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च चुलिदैं ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च चुलिदैं !
काठमाडौं । सुशासनको चर्काे नारा लगाउने सरकारको पालामा पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च चुलिदै गएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले जेठ महिनामा विभिन्न मन्त्रालयको माग दाबी अनुसार निकासी गरेको रकम ५ करोड ५१ लाख ५२ हजार ६ सय २७ रुपैंया रहेको छ ।
गत वैशाख र जेठ महिनामा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण खर्चको विवरण अर्थमन्त्रालयको निकासीबाट बुझ्न सकिन्छ । गत वैशाख महिनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नौं दिने चीन भ्रमणमा भएको खर्च ३ करोड ९ लाख ५५ हजार अर्थमन्त्रालयले जेठ महिनामा निकासी गरेको थियो । यसै गरि वैशाख २६ बाट प्रधानमन्त्रीको सात दिने भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणको दुई करोड १२ लाख ८५ हजार रुपैंया खर्च भएको जनाइएको छ ।
विभिन्न समयमा हुने वैदेशिक भ्रमणको नाममा बढ्दै गएको अनुत्पादक खर्चले मुलुकलाई थप ब्ययभार बोक्न बाध्य बनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यस आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब ५५ करोड अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको देखाएको छ ।
मन्त्री,प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको नाममा हुने वैदेशिक भ्रमणले देशलाई थप आर्थिक भार थपेको अर्थविदहरुले चिन्ताको विषय भएको जनाएका छन ।